लकडाउनमा बस्दा आफन्तको चिन्ता भो ? त्यसो भए यी एपमार्फत सजिलै भिडियो कुराकानी गर्नुस् - Technology Khabar
» लकडाउनमा बस्दा आफन्तको चिन्ता भो ? त्यसो भए यी एपमार्फत सजिलै भिडियो कुराकानी गर्नुस्
लकडाउनले गर्दा मानिसहरु बाहिर निस्कन र आफन्तहरुलाई भेट्न रोक लगाईएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईं आफ्ना खास मानिसहरुलाई ‘मिस’ गरिरहनुभएको हुन सक्दछ ।
लकडाउनमा एक्लै भएको बेलामा तपाईँलाई हामी यस्तो ५ एप्सको बारेमा जानकारी दिनेछौं जसले तपाईँलाई बिना कुनै अतिरिक्त शुल्क आफन्तसँग कुराकानी गर्न र उनीहरुलाई नजिक बनाउन सहयोग गर्दछ ।
सिधै भन्दा तपाईँले आफन्तसँग च्याट गर्न वा भिडियो कल गर्न यी माध्यमहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । तर त्यसको लागि तपाईँको मोबाइल, ल्यापटप वा ट्याबलेटमा वाईफाई भने जोडिएको हुनुपर्नेछ ।
व्हाट्सएप विश्वभर लोकप्रिय मेसेजिङ्ग ऐप हो। अधिकांशको फोनमा व्हाट्सएपको एप डाउनलोडेड छ। च्याट गर्न र रोचक किसिमका स्ट्याटसका साथ तपाईँ ह्वाट्सएपमा भिडियो कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
व्हाट्सएपमा कुनै बाहिरी व्यक्तिको कुनै हस्तक्षेप हुँदैन र फोन नम्बरको आधारमा प्रयोग हुने हुँदा भिडियो कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईं व्यक्तिगत भिडियो च्याटको साथ धेरैजनासँग ग्रुप भिडियो कलहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ र एकैपटकमा ४ जना साथीहरुसँग कुरा गर्न सकिन्छ।
व्हाट्सएपमा तपाईँ ती व्यक्तिहरुसँग भिडियो कुराकानी वा च्याट गर्न सक्नुहुन्छ जसको तपाईँसँग मोबाइल नम्बर छ । तर केहि त्यस्तो साथीहरू पनि हुन्छन जो सँग च्याट मात्र हुन्छ तर फोन नम्बर आदान प्रदान भएको छैन्। त्यस्तै साथी वा आफन्तहरुसँग कुराकानी वा च्याट गर्नका लागी फेसबुक मेसेन्जर सबैभन्दा उपयुक्त हो ।
फेसबुक मेसेन्जरमा च्याट गर्नका लागि या त डेस्कटप साइटमा लगइन हुनुपर्दछ वा फेसबुक मेसेन्जरको छुट्टै एप मोबाइलमा डाउनलोड गर्नु पर्दछ । फेसबुक मेसेन्जर पनि पूर्ण रूपमा निशुल्क छ र तपाईँको फ्रि एकाउन्टबाट एक पटकमा ८ जना मान्छेसंग ग्रुप भिडियो कल गर्न सकिन्छ।
यो नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने च्याटिङ्ग प्लेटफर्म पनि हो ।
गूगल डुओ टेक जायन्ट कम्पनी गूगलको मेसेजिङ्ग एप है। यो ऐपको माध्यमबाट कुनै पनि स्मार्टफोनबाट अर्को स्मार्टफोनमा सिधै भिडियो कल गर्न सकिन्छ। यसको लागि केबल तपाईँले गूगल एकाउन्टमा लगइन गर्नु पर्नेछ भने जो व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको जीमेल एकाउन्ट तपाईँसँग हुनुपर्नेछ । गूगल डुओमा पनि एक साथ ८ जना व्यक्तिसँग भिडियो कल गर्न सकिन्छ। यो ऐपमा पनि यूजर्सलाई व्हाट्सएप र फेसबुक मेसेन्जर जस्तो आर्कषक फिल्टर्स उपलब्ध छन्।
फेसटाइम ती मानिसहरुका लागि उपयुक्त हो जो आईफोन प्रयोग गर्ने गर्दछन् । फेसटाइम गर्नका लागि कुनै थर्ड पार्टी एपलाई तपाईँको फोनमा इन्स्टल गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन् । आफ्नो फोनबुकमा सेभ भएको नम्बरबाट नै तपाईँ फेसटाइममा जोडिन सक्नुहुन्छ ।
आईफोनमा फेसटाईम गर्ने बेलामा फोनको सेलुलर नेटवर्कका साथै वाईफाईको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
एप्पलको यो ईनबिल्ट एपको माध्यमबाट तपाईँले एक पटकमा ३२ जना मानिसहरुलाई भिडियो च्याट गर्न सक्नुहुन्छ । तर ती सबैसँग आईफोन हुनु आवश्यक पर्दछ ।
स्काइप जति पुरानो छ त्यति नै विश्वसनिय छ । कयौं वर्षदेखि स्काईप भिडियो च्याट सेवा दिईरहेको छ । यो एपको प्रयोग तपाईँ मोबाइलका साथै पर्सनल कम्युटरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईँ एन्ड्रोयड यूजर हो वा आईफोन यूजर यसमा कुनै फरक पर्दैन केबल तपाईँले प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट यसको एप डाउनलोड गरेर लग इन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसमार्फत कुरा गर्न दुबै तर्फ स्काईप एप उपलब्ध भएको हुनुपर्दछ ।
यसबाहेक इमो, वीच्याट, ह्यांगआउट, लाइन, टेलिग्राम, भाइबर लगायतका कयौं एपहरु छन् ।